पाँचथरमा बाढी पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या २८ पुग्यो « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार १८:३५
पाँचथरमा बाढी तथा पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या २८ पुगेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले पहिरोमा पुरिएर थप दुई जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै सनाखत गरेसँगै मृतकको संख्या २८ पुगेको हो । प्रहरीका अनुसार मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१ की सहमाया आङदेम्बे र सोही गाउँपालिकाको वडा नं. २ की गीता राईको पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएको हो । उनीहरुको उमेर भने खुल्न सकेको छैन् । पाँचथर प्रहरीले यसअघि नै २६ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै सनाखत गरिसकेको छ ।
पाँचथरमा अझै छ जना ब्यक्तिहरु बाढी तथा पहिरोमा परी वेपत्ता छन् । उनीहरुको खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ । वेपत्तामध्ये दुई जना इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु छन् ।
उनीहरु पहिरोमा परी घाइते भएका पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं. ५ चिसापानी पञ्चमीका स्थानीयवासीको उपचारमा आएका थिए । यस्तै पाँचथरमा बाढी तथा पहिरोमा परी आठ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका चार जनालाई उद्धार गरी थप उपचारका लागि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको छ ।